Lọ ọrụ Disinfection & Sterilization | China Disinfection & Sterilization Ndị na-emepụta na ndị na-eweta ngwaahịa
GMIN washers mepụtara site na SHINVA dị ka GMP kachasị ọhụrụ si nwee ike ịsacha, saa, kpochaa na ngwaahịa akọrọ. Usoro nhicha ahụ nwere ike ikwughachi na ndekọ, si otú a nwee ike idozi nsogbu adịghị mma nke usoro ịsa aka. Usoro a washers na-ezute FDA na EU chọrọ.
GD Series kpọrọ nkụ Okpomọkụ Sterilizer
Akọrọ sterilizer a na-ejikarị eme ya maka ịgba ọgwụ nke ihe ndị na-eguzogide ọgwụ dị elu. Ọ na-eji na-ekesa ikuku dị ọkụ dị ka mgbasa ozi na-arụ ọrụ maka izu ike na depyrogenation ma zute ihe GMP, EU GMP na FDA chọrọ. Etinye ihe n’ime ụlọ, bido ịmalite ịgba afọ, mgbe ahụ ị na - ekesa onye ofufe, ọkpọkọ ọkpọ na ikuku ikuku ga - arụkọ ọrụ ọnụ maka ikpo ọkụ na - ekpo ọkụ Site n'enyemaka nke mgbasa mgbasa, ikuku na-ekpo ọkụ na-asọba n'ime ụlọ site n'ụzọ dị elu HEPA na-eguzogide ọgwụ ma na -emepụta ikuku ikuku. A na-ewepu mmiri dị n'elu isiokwu site na ikuku ikuku na-ekpo ọkụ wee wepụ ya n'ime ụlọ. Mgbe ụlọ okpomọkụ rutere ụfọdụ uru, iyuzucha valvụ na-emechi. Ikuku ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekesa n'ime ụlọ ahụ. Site na ntinye ikuku ohuru, ime ụlọ nwere nrụgide dị mma. Mgbe emechara ụlọ ịgbaji na-akwụsị, ikuku dị ọcha ma ọ bụ mmiri dị n'ime mmiri na-emeghe maka jụrụ oyi. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-adaba na ọnụọgụ setịpụrụ, valvụ akpaka na-emechi, a na-enyekwa mkpu na-ahụ anya na nke ọhụụ maka ngosipụta nke ọnụ ụzọ mmeghe.